Iindlela zaseYurophu eziza kubanjelwa eLodz, ePoland
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Iindaba zeShishini lokuhlangana » Iindlela zaseYurophu eziza kubanjelwa eLodz, ePoland
Airlines • isikhululo • Iindaba zeManyano • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zeShishini lokuhlangana • iindaba • Iindaba zasePoland • Tourism • uthutho • Iindaba zeWired Travel • Iindaba ezahlukeneyo
Kwinkomfa noonondaba namhlanje, kwabhengezwa ukuba isixeko sesithathu ngobukhulu ePoland, Lodz.
Njengeqonga eliphambili labenzi bezigqibo abaphambili be-airline eYurophu, iiNdlela zaseYurophu ziya kubonelela ngeqonga leLodz ukukhulisa ulwazi nokubonisa ithuba elibalulekileyo lokuthengisa elinikezelwa yiCentral Poland kwiinqwelomoya ezihamba phambili nezikhula ngokukhawuleza eYurophu.
USteven Small, umlawuli wemisitho, uRoutes uthe “sonwabile kakhulu ngokusebenza nesikhululo seenqwelomoya iLodz kunye nabalingane babo beqhinga lokuzisa i-Routes Yurophu edolophini ngonyaka ka-2021. ixesha lesinye sezixeko zokugqibela ezingafunyanwa eYurophu. Ngezibonelelo kunye nomthamo wabagibeli abazizigidi ezibini ngonyaka, isikhululo seenqwelomoya sibonelela ngamathuba amakhulu kuluntu lwaseYurophu lwendlela yophuhliso. Ndiqinisekile ukuba iiNdlela zaseYurophu ziya kukhuthaza ukukhula okukhulu kunxibelelwano lomoya kwaye zikhanyise ukuqaqamba kwiCentral Poland. ”
U-Anna Midera Ph.D., uMongameli weBhodi kunye ne-CEO yesikhululo senqwelomoya saseLodz, uthe "Iindlela zaseYurophu ngumsitho okwinqanaba elifanayo ne-UEFA European Championship okanye i-ExPO Exhibition. Ndinebhongo ngento yokuba iLodz kunye nesikhululo sethu seenqwelomoya siza kubamba umsitho obaluleke kangaka. Simema umhlaba wonke wokuhamba ngenqwelomoya eLodz ukuba ibonise wonke umntu ukuba iLodz sisixeko esikhulu entliziyweni yommandla owomeleleyo kwezoqoqosho-indawo ekuyiwa kuyo efanelekile ukutyelelwa umsebenzi kunye neshishini kunye nekhefu lesixeko. Siqinisekile ukuba xa iindwendwe zethu zibona iLodz zingathanda ukusungula ishishini lazo apha, ziphuhlise iindlela kwaye zizise abakhenkethi abatsha eLodz. Siza kubonisa isitrato esidumileyo sasePiotrkowska, sihlaziye uyilo lweshishini kunye nehotele egqibeleleyo kunye nesiseko sokutya. Imizila i-Yurophu ngo-2021 iza kutshintsha umdlalo kwisikhululo senqwelomoya saseLodz, esinokwamkela abakhweli abamalunga nezigidi ezi-2 ngaphandle kotyalo-mali.
UMarcin Horała, uSekela-Mphathiswa weziSeko, i-Plenipotentiary kaRhulumente yeNdawo yoThutho eSolidarity, uthe “Kunyaka ophelileyo, izikhululo zeenqwelo moya zasePoland ziphatha malunga ne-49 mln yabakhweli kwaye amandla ophuhliso lweemarike aphindwe kabini kunaseNtshona Yurophu. IPoland idlala indima ebaluleke kakhulu kwimakethi yezobuchwephesha yaseYurophu, engqinwa kukuchongwa kwezikhundla eziphezulu zeengcali zasePoland- Mnu.Janusz Janiszewski onguMongameli we-Arhente yeeNkonzo zokuHamba koMoya ePoland otyunjelwe ukuba nguSihlalo weBhodi yokuLawula i-A6 kunye noMongameli uPiotr Samson ICandelo lezoLawulo lwezoHambo loLuntu elonyulwe ukuba libe nguSihlalo we-Arhente yoKhuseleko lwezoPhapho kwi-European Union. Into yokuba iRoutes Yurophu ihlelwe ePoland okwesihlandlo sesithathu ibonisa ukuxabiseka kwezicwangciso zethu zophuhliso lokuhamba ngenqwelomoya kubandakanya nezo zinxulumene neprojekthi yeSolidarity Transport Hub. Ukuphunyezwa kwale projekthi kuyakwandisa intsebenziswano phakathi kwesixeko esilikomkhulu kunye nesona sixeko sikhulu ePoland, iLodz, engomnye wabaxhamli abakhulu ekwakheni iziseko zophuhliso zezothutho ePoland nakuMbindi naseMpuma Yurophu. Ngesi sizathu kanye, ukukhethwa kweLodz njengombhiyozo wohlelo olulandelayo lweendlela zaseYurophu kuxela ukukhula okukhulayo koqoqosho kulo mmandla uphela ”.
UPiotr Samson, uMongameli weCivilian Aviation Authority kunye noSihlalo we-European Union Aviation Safety Agency wongeze wathi “IPoland lilizwe lokuqala ukubamba eli qonga lophuhliso lendlela libalaseleyo kathathu. Zombini iWarsaw Chopin Airport kunye neKrakow Airport ziye zaneempembelelo ezintle zelifa, ngenxa yokusingatha lo msitho, kwaye siqinisekile ukuba iLodz izakubona amanqanaba afanayo empumelelo. Iindlela zokuHamba iYurophu iza kubeka uLodz kwindawo ephambili yophuhliso lwendlela kwaye ihambise iinkonzo zomoya ezintsha esixekweni nasePoland. ”
UJanusz Janiszewski, uMongameli we-Arhente yeeNkonzo zoMoya wasePoland kunye noSihlalo weBhodi yokuLawula i-A6, uthe “iPoland ihlala ibalaseliswa njengemodeli yentsebenziswano eyimpumelelo kwicandelo lezobuchwephesha. Ukusebenza kwethu kakuhle, ukutyala imali kwitekhnoloji entsha kunye nentsebenziswano ekuphuculeni imijelo yezithuthi zomoya zihlala ziqwalaselwa ngoogxa bethu kumzi mveliso. Kuyandivuyisa ukuba iPoland iyakuphinda ibambe owona msitho ubaluleke kakhulu kuluntu lwaseYurophu lwendlela yophuhliso. Ndingathanda ukuvuyisana ne-Lodz, kuba impumelelo yayo ithetha impumelelo yecandelo lonke leenqwelo-moya ePoland. ”
UTony Griffin, uSekela Mongameli oMkhulu wezoBoniswano, i-ASM uthe “sisebenze ngokusondeleyo nesikhululo seenqwelomoya saseLodz ngaphezulu kweminyaka emithathu, sibonisa imfuno yeenkonzo zomoya ezintsha kwisixeko sesithathu ngobukhulu ePoland kwiinkampani zeenqwelo moya. Ukuhamba kwabakhweli kukhule kwisikhululo senqwelomoya saseLodz nge-11% kunyaka ophelileyo kwaye kulindeleke ukuba inyuke kwakhona nge-14% ngo-2020. Iinkonzo zomoya ezintlanu esele zongezwa kwinethiwekhi yesikhululo seenqwelomoya ngeli hlobo: iRhodes, iHeraklion, iCorfu, iBodrum kunye neVarna. Ukugxininiswa kwabo bathatha izigqibo ngenqwelomoya kuyo nayiphi na iminyhadala yendlela enikezelwe kulo mmandla, iRoutes Yurophu iya kuba sisiseko sokukhula kwenethiwekhi yesikhululo seenqwelomoya. ”
Iindlela zaseYurophu ezingama-2021 ziya kubanjwa ngomhla wama-26 ukuya kowama-28 ku-Epreli 2021 eLodz, ePoland e-Expo-Lodz. Umsitho uzakubanjwa yiLodz Airport, exhaswa ngamahlakani ayo e-Arhente yeeNkonzo zokuHamba koMoya ePoland kunye noGunyaziwe wezoPhapho.